Tuesday, 26 December 2017 10:48
Finfinnee, Mudde 17, 2010 Aanaalee Biiroo Bishaanii, Albuudaa fi Inarjii Oromiyaan filataman keessatti misoomni ‘gaazii’ baayoo raawwatamuuf jedha.
Biiruchi kana dura misooma ‘baayoo-fiwuulii’ biqiltuuwwan kan akka qobboo irraa argamu sadarkaa yaaliitti aanaalee afur keessatti jalqabe, godinaalee 20 naannitii keessatti kan argaman aanaalee misoomichaaf mijatoo ta’an keessatti misoomsuuf karoora qabateera.
Kanaanis sanyiin qobboo kiiloo giraamni kuma 1 kan qophaa’e yoo ta’u, fiixee dallaa qonnaa bulaa heektaara kuma 1 irratti akkasumas lafa miidhame irratti misoomsuuf hojii qophii jalqabuusaa biiruchatti Daayirektarri Humna Baayoo Obbo Tasfaayee Sooressaa himaniiru.
Dhiheessii sanyii fi bakkaa hojii adda baasuuf bajati Birrii miliyoonni 1.5 qabamuusaa ibsameera.
Kana malees, wiirtuu qorannoo baakkoo waliin tumsuun maashinni falfallii fi cuunfaa qobboo abbootii-warraa 120f rabsameera jedhameera. Sarkaalam Geetaachootu gabaase.(FBC)
More in this category: « Ityoophiyaatti proojaktiin dandamannaa hongee horsiisee bulaa Birriin miiliyoonni dhibba 4 oliin hojjetamaa jira Magaalonni Naannoo Oromiyaa keessaa tatamsa’inni HIV/AIDS keessatti sadarkaa olaanaarra ga’e adda baafaman »
Torbe Kana 14029
Ji'a Kana 25425
01/05/07 irraa eggalee 8124580